Go’aan noocee ah ayey tahay inuu Farmaajo ka qaato Xiisadda Siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Go’aan noocee ah ayey tahay inuu Farmaajo ka qaato Xiisadda Siyaasadeed ee...
Go’aan noocee ah ayey tahay inuu Farmaajo ka qaato Xiisadda Siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya?
Dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa kusii wada jeedo waxyaabaha kasoo bixi doono Kulanka seddex geesoodka ah ee ka dhacayo Magaalada Nairobi.
Prof. Axmed Macalin Nuur oo ah Macalin dhanka Siyaasadda ah ayaa qabo in Madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay inuu qaato go’aan ay ku wada qancaan Shacabka Soomaaliyeed.
“ Madaxweyne Farmaajo waxaa looga fadhiyaa inuu qaato go’aan ka farxiyo Shacabka Soomaaliyeed, waa inuusan ka tanaasulin mowqifka dowladda ee ah inaan gorgorton laga gelin Badda Soomaaliya” ayuu yiri Prof. Axmed oo la hadlayey Badweyn Online.
Wuxuu sheegay inaysan marnaba macquul aheyn inuu Madaxweyne Farmaajo aqbalo in la joojiyo Dacwadda Badda Soomaaliya ee taalo Maxkamadda Adduunka.
“ Waa inuusan Farmaajo aqbalin in dacwadda Badda Soomaaliya lagu xaliyo qaab Gobol ah, sababtoo ah taas waxay keeni doontaa inay meesha ka baxdo dacwadda hor taalo Maxkamadda Adduunka oo ay u badan tahay inay ku guuleysato Soomaaliya maadaama waxa la isku heysto ay iyada leedahay” ayuu sii raaciyey.
Madaxweyne Farmaajo iyo Uhura ayaa Maanta kulan ku yeelan doono Magaalada Nairobi waxaana dhagaha loo taagayaa waxyaabaha kasoo bixi doono kulankaas oo uu gar wadeyn ka yahay Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed.
Previous articleMaxaa laga fileysan karaa Shirka Farmaajo iyo Kenyatta ku dhexmaraya Nairobi ?
Next articleGabar Soomaali ah oo afduubatay diyaarad oo dalbatay in dib loogu soo celiyo…..
Weerar Bam oo lagu qaaday Ciidamo ku sugnaa Bar Kontrol Magaalada Muqdisho iyo rasaas…
KENYA oo soo iibsatay diyaarado halis weyn ku ah kooxda Shabaab iyo diyaaradahaas oo…
Maareeyihii Golaha Murtida Tiyaatarka oo Xilkii laga qaaday Muxuu eersaday Abwaan Guure?.
Marriage Experts’ Help – 2 Reasons Why Guys Pull Away in Relationships
Sawirro: Ra’iisul wasaare Rooble oo gaaray Jowhar + Ujeedka
Duqeyn Lala Beegsaday Goob Ay Munaasabad Uga Socotay Al-Shabaab Iyo 3 Meel Kale Oo La Duqeeyey
“Shirka Puntland ee maanta lasoo xirayo waxaa kasoo bixi doono wax dan u ah Soomaalida” Wasiir Bidhaan+Vedio